Sagantaa cufiinsa ispoortii akka guutuu biyyaatti kaleessa (21/05/2017) – Kichuu
HomeSportsSagantaa cufiinsa ispoortii akka guutuu biyyaatti kaleessa (21/05/2017)
Sagantaa cufiinsa ispoortii akka guutuu biyyaatti kaleessa (21/05/2017)
Sagantaa cufiinsa ispoortii akka guutuu biyyaatti kaleessa (21/05/2017) Finfinneetti gaggeeffamerratti duuka buutonni Feyisa Lilesa Gemechu akkasitti biyya isaanii faarsan:
Bilisummaa/Biyya tiyya (2)
Akka bofaa lafa lo’a
Oromoo maaltu danda’a?
Kuni dhuma ispoortii kan bara kanaa magaalaa Finfinnee keessatti.
Qabsoon biyya jirti gaafaan ja’u kijibaa miti. Tana Oromooni martinuu ni beeytan. Qeeyroon Oromiyaa falmaa isaanii hiree argataniin qabsoo godhuu ittuma jiran.
Nu warri baqatee ykn hiree argatee biyyaa baane hujiin teenya isaan humneessuu qofa haa taatuu.
Qabsoo galmaan kan ga’u jajabeen biyya keessaa fii biyyoota ollaa gaarree qabsooti dabaluudhaan qofa. Tanaaf hiree isaan gurmeessuu irratti hojachuu malee waan biraa dhiisuudha qabna. Nan taajabinaa ani bosona kan mukkeeniif dhagaa qofaatu ture dur akka himanitti. Arra Oromooni biyyaa bosona san caalanii akka jiran qabatamaan niin beekaa. Tanaaf qabsoon biyya keessatti galuu malee carraan biraa hin jiruu hubannee galchuudhaaf carraaquun dirqama deegartoota qabsoo tanaati. Jawar
OMN Oduu 22 Caamsaa 2017